Zvinyorwa zvaChris Rothstein pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Chris Rothstein
Kana zvasvika kune SaaS software yekutengesa, kunongedza vanhu hakusi muenzaniso weunyanzvi. Mushure mezvose, avhareji yevanhu 5.4 vanobatanidzwa mune rimwe bhizinesi rekutengesa sarudzo. Zvichipa kuti boka-based vetting ndiyo yakajairwa, account-yakavakirwa kutengesa (ABS) inobudirira pane kunongedza zvakanangwa zvinotungamira. Iyo account-based nzira yekutengesa, zvisinei, inogona kutora nguva. Kuteedzera kwakadzika metric uye nguva dzakatarwa kune akawanda zvibodzwa, pamwe nekubatana pane iro ruzivo kune ese emukati zvikwata,